"प्राचीन" र पुराना इतिहास Kontantlöshetens | Apg29
पुस्तक द cashless षडयंत्र देखि। आधुनिक अर्थमा, विच&
लामो अन्य कुराहरू पैसा प्रयोग वास्तविक नगद अघि। खोल यस्तो पोलिनेसिया पैसा रूपमा प्रयोग। "पैसा" को अन्य उदाहरणहरू पत्थर, पंख, माछा हुक पनि पशुधन थिए।
पनि प्राचीन मिश्र र रोमन साम्राज्य मा spannmålsköp मा, उदाहरणका लागि, cashless भुक्तानी गरिन्छ। कम्पनी वेस्टर्न युनियन न्यूयोर्क राज्य मा रोचेस्टर को अमेरिकी शहर मा स्थापित भएको थियो। यसलाई यो मिसिसिपी मुद्रण टेलीग्राफ कम्पनी भनिन्थ्यो जब 1851 फिर्ता यसको जरा छ। वेस्टर्न युनियन मुख्यतया संग पठाएको पैसा काम र विश्वव्यापी टेलिग्रामहरू छ। प्रारम्भिक क्रेडिट कार्ड को एक प्रकारको युरोप मा 1890 शताब्दीमा पहिले नै थिए। सन् 1914 तिनीहरूले सहमत भएको सम्झौता प्रयोग गर्न सकिएन भनेर क्रेडिट कार्डबाट cashless खरिद संग वेस्टर्न युनियन मा सुरु भयो।
वास्तविक क्रेडिट कार्ड 20 औं शताब्दीमा, संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो तेल कम्पनीहरु र होटल चेन द्वारा जारी उत्पत्ति। तेल कम्पनीहरु कार्ड जारी गर्न थाल्दा यी पुराना कार्ड को बढ्दो प्रयोग गर्न योगदान एक कारक Motoring वृद्धि गरेका थिए। विभाग पसलहरु पनि क्रेडिट मा कारोबार गर्ने ग्राहकहरु पहिचान टोकन एक प्रकारको प्रकाशित गर्न यो दशक को समयमा थाले। विभाग स्टोर NK प्रयोग हुनत वास्तविक क्रेडिट कार्ड पीतल टोकन गर्न पूर्व दशकहरूमा। स्वीडेन पहिलो "क्रेडिट कार्ड" थियो तथाकथित NK-कार्ड त्यसैले वास्तवमा संख्यात्मक mässingspollett थियो। को 60s मा NK अमेरिकी मोडेल को आधुनिक अर्थमा मा आफ्नै क्रेडिट कार्ड दिए।
केही कम्पनीहरु बाल्यकाल कार्ड मा सुरु आफ्नो सर्वश्रेष्ठ ग्राहकहरु गर्न क्रेडिट र डेबिट कार्ड प्रस्ताव। यी प्रयोग गर्न दुष्कर र पूर्ण प्रश्न कम्पनी बाँधिएको थियो। पसलहरूमा र अन्य कारोबार त्यसपछि आफ्नै कार्ड थियो। वरिपरि 1938 प्रत्येक अन्य गरेको कार्डहरू स्वीकार गर्न थाले। कार्ड counterfeiting जोखिम कम गर्न पानामा को 30 सेकेन्ड मा गरेका थिए। ब्रूकलिन को Flatbush नेशनल बैंक को जन Biggins बैंक द्वारा जारी 1946. मा कार्यक्रम पहिलो क्रेडिट कार्ड आविष्कार, बैंक ग्राहकहरु र स्थानीय व्यापारीहरूले बीच ChargeIT लिंक खरिद भनिन्छ।
कसरी यो सबै साँच्चै थाले - डिनर क्लब
आधुनिक अर्थमा, विचार 1949. सार्वजनिक cashless खरिद गर्न उठ्दा फ्रैंक McNamara नाउँ गरेकी एक मानिस अर्को साम्राज्य राज्य भवन आफ्नो क्रेडिट यूनियन ह्यामिल्टन क्रेडिट निगम आफ्नो कार्यालय थियो जसमा गर्न मेजर गरेको केबिन ग्रिल रेस्टुरेन्ट मा खाए। उहाँलाई आफ्नो साथी अल्फ्रेड Bloomingdale र वकील राल्फ Schneider थियो। तिनीहरूले छिमेकीहरूलाई आफ्नो फरक क्रेडिट कार्ड lent र तिनीहरूलाई थुप्रै फिर्ता भुक्तानी छैनन् जब सक्छ ग्राहक McNamara कम्पनी आफ्नो ऋण तिर्न सकेन थियो जो ग्राहकको को समस्या छलफल।
McNamara पनि उहाँले खानाको लागि भुक्तानी गर्न उनको वालेटमा संग गएको थियो फेला पारेका। एक व्यापार कार्ड मा आफ्नो हस्ताक्षर लेखेर उहाँले पछि पारित बिल हुन सक्छ रेस्टुरेन्ट गर्न दिनुभयो। सामान्य राय अनुसार McNamara वास्तविक क्रेडिट कार्ड हुने के लागि विचार थियो कि यी दुई कुराहरू interacted। 1950 मा उहाँले आफ्नो वकील Schneider साथ कम्पनी डिनर क्लब स्थापना।
कम्पनी ग्राहकहरु र तिनीहरूले किनिएका कम्पनीहरु बीच एक मध्यस्थ भयो। कार्ड मा भुक्तानी एजेन्सीहरू 'नाम लेखिएको पहिलो कार्ड मा। कार्ड भोजन को भुक्तानी लागि ढोल बजाउने व्यक्ति को धेरै प्रयोग गरिन्छ। डिनर क्लब कार्ड सुरुमा थिए तिनीहरूले प्रत्येक महिना ऋण लिइएको सबै भुक्तानी पापीलाई जो कार्ड चार्ज।
Bloomingdale अवधि कम्पनी मा साझेदार लागि थियो। अन्यथा, उहाँले विभाग Bloomingdale गरेको स्टोर र फोटो मोडेल विकी मोर्गन यसको कुख्यात förhållade गर्न हकदार रूपमा भन्दा प्रसिद्ध थियो। को डिनर क्लब इतिहास Matty सिमंस अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। सिमंस डिनर क्लब को उपाध्यक्ष को एक अवधि तर टेलिभिजन र फिल्म निर्माता रूपमा भन्दा प्रसिद्ध छ।
अमेरिकी cashless snowball अब रोलिंग थियो र हरेक वर्ष बडा र बडा पायो। पहिलो बैंक जारी डेबिट कार्ड 1951 मा लङ आइल्याण्ड को फ्रेंकलिन नेशनल बैंक द्वारा जारी गर्न थाल्दा एक कदम थियो। चाँडै, यी कम्पनीहरु को डिनर क्लब प्रतियोगिता र थप ठूलो क्रेडिट कार्ड दिग्गज गयो।
अमेरिकन एक्सप्रेस र वेल्स फार्गो
को एक्सप्रेस मेल सेवा पूरा गर्न भैंसीको मा 1850 मा अमेरिकन एक्सप्रेस स्थापित भएको थियो। पछि यात्रा उद्योग मा नगद transports र गतिविधिहरु संग विस्तार। हेनरी वेल्स विलियम फारगो र यूहन्ना Butterfield साथ अमेरिकन एक्सप्रेस स्थापित। तीन वाहक एक मर्ज थिए। देर 50 औं शताब्दीमा, डिनर क्लब संग प्रतिस्पर्धा मा क्रेडिट कार्ड सञ्चालन थाले। कम्पनी पनि टेलिभिजन संसारमा यसको पहुँचमा थियो। अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूयोर्क मा विभिन्न भवनहरु यसको मुख्यालय थियो।
अमेरिकन एक्सप्रेस लागि समय पनि यही नामको मान्छे को अब वेल्स फार्गो स्थापित भएको थियो। वेल्स फार्गो पछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बैंकहरू एक नाम थियो। अमेरिकन एक्सप्रेस र वेल्स फार्गो इतिहास त यो भेद गर्न गाह्रो छ कि intertwined छ। अमेरिकी एक्सप्रेस शुरू रूपमा 1958 मा आफ्नो पहिलो कार्ड शुरू रूपमा पनि क्रेडिट खाता। यसलाई प्राथमिकताको गर्ने प्रयोग गरिएको छ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डहरू व्यवसायी छ। अमेरिकन एक्सप्रेस हालै प्रमुख खुद्रा श्रृंखला Walmart जो एक प्रीपेड कार्ड Bluebird प्रिपेड कार्ड बाहिर दिन्छ काम गरिएको छ।
अमेरिकन एक्सप्रेस नै सबैभन्दा महंगा कार्ड को मामला मा मार्केटिङ संग प्रत्यक्ष काम छैन भनेर विशेष हुन ठान्नुहुन्छ। ग्राहक थप एक विशेष क्लब सदस्य मानिन्छ।
भर्ती व्यवसाय भन्दा Masonic लज थप reminiscent छ। कम्पनी ग्राहकहरु लागि oddest खरिद र सेवाहरू संगठित गरे। डिजाइन आफ्नो ग्राहकहरु को रोल्स-रोयस उपचार को केहि reminiscent छ। तर कार्ड शानदार उपस्थिति एक लक्जरी कार तुलना गर्न हुँदैन। बरु तिनीहरू "गोबर एउटा पुरानो बिग्रेको ट्रली" हो। यो पुस्तकमा समय समयमा हुन्छ। क्रेडिट कार्ड को घृणा बिजुली नकारात्मक भावना गर्न तर्क देखि स्विच गर्न लेखक गरेको मस्तिष्क हुन्छ।
अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डहरू को थप विशेष संस्करण त्यसैले "सेलिब्रिटी कार्ड" Elvis देखि Zlatan गर्न सबै प्रयोग गरिएको छ गरिएको छ। केही rappers पनि आफ्नो प्रिय कार्ड लागि गीत लिखित छ। यो पुस्तक शायद पहिले केवल एक वास्तवमा हुनुको छाप दिनुभएको छ। यो क्रेडिट कार्ड र अन्य cashless विरुद्ध तर्क संग studded छ। तर पुस्तक पनि एक फुटबल पागल लेखक द्वारा लिखित cashless तिर "hatbok" र वास्तवमा (Zlatan को बोल्ने) छ।
तर घृणा सत्यतथ्य द्वारा समर्थित छ। माथि Dyngkärran तथापि, एक स्वभाविक synapsfyrverkeri कारण एक अपवाद थियो। बस जस्तै बच्चा अश्लील र नस्लवाद सजिलै पनि समस्या किताबको विषयहरू वरिपरि लेखक व्यक्तिगत बन्न रूपमा किनभने क्रोध र घृणा को भावना को व्यक्तिगत हुन्छ विरुद्ध लडाई रूपमा। त्यहाँ निजी सबै समय भएको छ।
कहिलेकाहीं थप व्यक्तिगत र संवादी भाषा र सामग्री पुस्तक स्विच, र त्यसपछि "औपचारिक विश्वकोश mentality" फर्कनुहोस्। अब मलाई पुस्तकको व्यक्तिगत भागहरु लागि टोन सेट गरौं। Zlatan यो पुस्तक पढ्दा भने, म उहाँले छ र यसको "लक्जरी" अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डहरू छुटकारा हुन्छ सुपर यार रूपमा उदाहरण द्वारा जान्छ आशा। उहाँले सबै भन्दा राम्रो के गर्छ गर्दै। एक फुटबल को क्रेडिट कार्ड टेप। जहाँ कुनै एक यो पाउन सक्नुहुन्छ जंगल मा टाढा बाहिर त बल खेलेकै। जहाँ यो सबै कार्डमा urinate गर्न उचित त जंगली जनावर हुन सक्छ। लेखक कसरी यो क्रोधित भावनात्मक हुन सक्छ? पुस्तक पढ्ने र किन पत्ता।
मास्टर कार्ड र भिषा - एक परिचय
मास्टर कार्ड (स्थापित 1966) बरु धेरै हजार बैंकहरू एक सहकारी संगठन हो कि विशुद्ध भन्दा सदस्यहरु
कम्पनीहरु सामान्य अर्थमा। त्यहाँ कार्ड लाइसेन्स बेच्छ सीमित कम्पनी हो। मास्टर कार्ड गरेको प्रारम्भिक इतिहास क्रेडिट कार्ड को लागि दुई बैंकिङ संगठनका जोडिएको छ। Interbank र WSBA। यो मास्टर शुल्क भनिन्छ क्रेडिट कार्ड को लागि एक परियोजना सिर्जना गरियो। मास्टर शुल्क पछि मास्टर कार्ड पुन: नामाकरण गरिएको थियो। एक वैश्विक कार्ड कम्पनी मा विकसित यो सुरु मास्टर शुल्क र मेक्सिकन बैंक बैंको Nacional बीच एक सहयोग थियो। कथा को विवरण Worthern बैंक द्वारा उठ्दा भन्ने कानुनी संघर्ष मास्टर शुल्क सामेल अनुमति छैन थियो। मास्टर कार्ड गरेको मुख्यालय न्यूयोर्क राज्य मा खरिद शहर अहिले छन्।
शो मास्टर कार्ड एक सहकारी संस्थाको समान छ। कम्पनी बैंकहरू को मुख्य रूप निर्वाचकगण व्यवसाय संघ स्वामित्वमा छ। त्यहाँ 1958. पहिलो कार्ड issuing भिषा पूर्ववर्ती BankAmericard प्रयोग BankAmericard सक्छ मात्र क्यालिफोर्निया मा शुरू पहिलो बैंक थियो बैंक अमेरिका संग बलियो लिङ्क हुन्। यो राज्य सीमाना मार्फत बैंकिङ सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको थियो। यो अन्य बैंकहरुलाई कार्ड इजाजत गरेर skirted। सबैभन्दा क्रेडिट कार्ड
गैर-सूचीबद्ध कम्पनी र सदस्य-स्वामित्व राष्ट्रीय BankAmericard बन्न अमेरिका को बैंक बाट बन्द काता थियो।
तिनीहरूले इनपुट भनिन्छ आफ्नो पहिलो क्रेडिट कार्ड बाहिर दिनुभयो रूपमा शो अघि एक समय यसको वर्तमान नाम पाए। यसलाई प्रमाणीकरण भनिन्छ आधार म र आधार द्वितीय लागि त नव उदीयमान कम्प्युटर प्रणाली लिङ्क थियो कि एक डेबिट कार्ड थियो। अनुकूल प्रणाली मास्टर शुल्क INAS र INET भनिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर थिए कि हेर्नुहोस् को भागहरु 1974 मा बेचिएको र IBANCO भनिन्छ बैंकहरू को एक समूह को एक सहायक भए थिए। कम्पनी भिषा संयुक्त राज्य अमेरिका अन्ततः मा राष्ट्रीय BankAmericard नाम थियो। IBANCO भिषा अन्तर्राष्ट्रिय बारे अन्तमा पुन: नामाकरण। कम्पनी क्रेडिट कार्ड को पहिलो पत्राचार यूसुफ विलियम्स को पहल मा, फ्रेस्नो शहर थियो। त्यसपछि क्यालिफोर्निया अन्य शहर मा मेलिंग आए। परियोजना आलोचना र ठगी दुवै को सबै समय मा marred थियो। 1970 शो सबै नाम परिवर्तन गरियो। क्रेडिट कार्ड को वैश्वीकरण अमेरिकी प्रारम्भिक बैंकहरू आफ्नै कार्ड सिस्टम त्यागेर मास्टर शुल्क वा BankAmericard या त त्यसपछि पछि मास्टर कार्ड र भिषा भइन् सामेल थाले।
1987 मा बैंक कार्ड सम्पूर्ण खुद्रा नेटवर्क Interlink (संयुक्त राज्य अमेरिका मा यस प्रकार को सबै भन्दा ठूलो नेटवर्क) को हेरचाह गर्न एक म्यान्डेट प्राप्त दृश्य। को '90 को दशक मा एटीएम मार्फत रकम संग लोड गर्न सकिएन भनेर स्मार्ट कार्ड भिषा नगद शुरू। साझेदार कार्यक्रम भनिन्छ केहि सहित चिप कार्ड गर्न चुम्बकीय धारी देखि विकास धक्का दृश्य। मैनहट्टन मा, बैंकहरू सिटीबैंक र Chase मैनहट्टन देर 90 को दशक मा एक परीक्षण कार्ड पूर्ण असफल भएको थियो कि। अक्सर, मानिसहरू एक पटक कार्ड चार्ज। इन्टरनेट खोज कम्पनी याहू संग एक साझेदारी इन्टरनेटमा खरीद पृष्ठ सिर्जना गर्न थाले। माइक्रोसफ्ट पनि खोल्न एकदम utkonkurerat सहयोग मान्छे आफ्नो कम्प्युटर मा आफ्नो बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने हेर्नुहोस्। प्रदर्शन क्यालिफोर्निया मा फ्रेन्सो मा मुख्यालय छ।
अमेरिकन एक्सप्रेस र डिनर क्लब क्रेडिट कार्ड आफूलाई बाहिर दिन भिषा र मास्टर कार्ड छैन, जबकि। उत्तरार्द्ध मामला मा, यो मुख्यतया कार्ड जारी गर्ने सदस्य बैंकहरू छ। क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु बीच एक महत्वपूर्ण फरक केही त अरूलाई छैन, यो अभिनय बैंक भन्न छ। भिषा र मास्टर कार्ड कार्ड डाटा संचार नेटवर्क धेरै प्राविधिक फरक अलग छ। मास्टर कार्ड प्रणाली, Banknet, भिषा गरेको VisaNet भनिन्छ।
रूपमा कार्ड प्रयोगकर्ता पूर्ण यी बैंकहरू को हात मा वास्तवमा हो सदस्य बैंकहरू द्वारा भिषा र मास्टर कार्ड यसरी नियन्त्रित छन्। भिषा र मास्टर कार्ड बीच प्रतिस्पर्धा किनभने एक संगठन को सदस्य हो भनेर भन्दा बैंकहरू अन्य सदस्यहरू पनि छन् व्यावहारिक अवस्थित छन्।
पत्ता लगाउनुहोस् र Sears
पत्ता लगाउनुहोस् वित्तीय सेवा वा छोटो पत्ता लगाउनुहोस् अर्को प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु छ। यो वित्त कम्पनी डीन Witter को विभाजन द्वारा 1985 मा स्थापित र Sears भाग भयो थियो।
पत्ता लगाउनुहोस् यो कार्ड कार्ड पत्ता लगाउनुहोस् दिन्छ लडका 2007 मा एक स्वतन्त्र कम्पनी बन्यो। प्रौद्योगिकी कार्ड नेटवर्क सञ्जाल र पल्स पत्ता लगाउनुहोस् भनिन्छ। उपनगरीय शिकागो मुख्यालय। 2008 पत्ता लगाउनुहोस् वित्तीय समूह Citigroup को डिनर क्लब किनेको।
Sears, Roebuck र कं रिचर्ड Sears र Alvah सी Roebuck द्वारा 1886 मा स्थापित भएको थियो। Sears सबै भन्दा ठूलो अमेरिकी मेल-अर्डर कम्पनीहरु सहित समय भयो। Sears पनि शिकागो गगनचुम्बी भवन Sears टावर संग सम्बन्धित छ अब विलिस टावर भनिन्छ। एक समय को लागि संसारको ऊंची भवन थियो जो गगनचुम्बी भवन Sears द्वारा 2004 सम्म स्वामित्व थियो।
चेक गर्ने 1200s आफ्नो मूल फिर्ता सक्छ। तर साँच्चै चेक बेलायतमा goldsmiths प्रयोग गरिने सुरु गर्दा मात्र बन्द गरे उपयोग गर्छन। जाँच इतिहास भर गरिएको छ, कहिले काँही नगद रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो एउटा उदाहरण हङकङ मा 50s मा सैनिकहरु एक नगद भुक्तानी रूपमा चेक प्रयोग गर्दा थियो। हरेक व्यापारी प्रत्येक खरीद चिनियाँ चेक हस्ताक्षर गरे। यो एक सैनिक धेरै महिना पछि उसले आफूलाई आफ्नो सम्पत्तिको मा थियो थिए जो एक चेक देखे कि हुन सक्छ।
क्रेडिट कार्ड र चेक त्यसैगरि बैंकिङ सर्तहरू कार्य। खाता होल्डरलाई प्राप्तकर्ता त्यसपछि बैंक मा उद्धार गर्न सक्छन् जो को राशि को लागि एक चेक लेख्छन्। जाँच खाता जम्मा हुन सक्छ (तुलना क्रेडिट कार्ड)। कसैलाई "बैंक कार्ड को चिप्लेकिरो संस्करण" को रूपमा चेक सिकाउने वर्णन गरे। kontantlöshetens मा बाल्यकाल को cashless बारेमा जाँच सुलझाने समाज बारे धेरै कुरा।
पहिले नै यो जाँच र cashless समाज जहाँ जन Diebold लागि 60 सताब्दी vurmade एक मानिस। आफ्नो परामर्श कम्पनी Diebold समूह यस दशकमा बैंकहरू धेरै कम्प्युटर आधारित नेटवर्क सिर्जना गरियो। Diebold सोचाइलाई जर्ज मिशेल फेडरल रिजर्व (अमेरिका केन्द्रिय बैंक) मा एक वरिष्ठ स्थिति थियो जो प्रभावित। उत्तरार्द्ध कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्विच गर्न अमेरिकी बैंकहरू प्रभावित गर्न खोजे। यो चेक नगद लागि आजको तर्क गर्न धेरै समान थियो जो, महंगा थिए दावी।
प्रारम्भिक 90 का मा चेक स्वीडेन मा सातौं भुक्तानी थियो। को 2000s मा, आंकडा सूक्ष्म प्रतिशत 0.1 छ। समय समाप्त स्वीडिश बैंकहरू यसरी थप र थप जाँच संग। स्वीडिश बैंकहरू को कुनै पनि मात्र चेक लागि चार्ज dared। त्यसपछि एक स्वीडिश बैंक अन्तमा गरे जब यो चेक लागि अन्य पछि र भाग्य लम्बाइ छाप थियो। जिज्ञासा रूपमा चेक ठगी संयुक्त राज्य अमेरिका भर एक अपराध हो, तर क्रेडिट खाता overdraw गर्न छैन।
इतिहास मा नगद एक बिट
लामो अन्य कुराहरू पैसा प्रयोग वास्तविक नगद अघि। खोल यस्तो पोलिनेसिया पैसा रूपमा प्रयोग। "पैसा" को अन्य उदाहरणहरू पत्थर, पंख, माछा हुक पनि पशुधन थिए। नियमित सिक्का को अभाव मा oddest भुक्तानी कहिलेकाहीं प्रयोग छ। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले फलाम बारहरू मुद्राको रूपमा स्पार्टा मा उनि बाहिर संसारबाट छुट्टयाएर किनभने प्रयोग।
दक्षिण पश्चिम सिक्का एशिया माइनर को भागहरु मा प्रयोग गर्न 600 ई.पू. मा सुरु नजिकै पूर्व हामी अब मध्य पूर्व कल के थियो। यो lydiske राजा Croesus थियो 500 ई.पू. मा चाँदी र सुनको सिक्का minting थाले। उहाँले पनि Croesus भनिन्थ्यो र एक बेहद धनी व्यक्ति को तत्संबंधी शब्द। जहाँ धेरै हदसम्म तामा प्रयोग बहुमूल्य धातु को कमी भयो। यो प्रारम्भिक रोम मा, उदाहरणका लागि, भयो। को वाइकिंग आयु समयमा दुवै इस्लामी दुनिया देखि र युरोप को भागबाट स्वीडेन धेरै सिक्का आयात थिए। Vikings को लागि यति मुद्रा बोल्न लागि, चाँदी मूल्य थियो। तसर्थ, चाँदी पनि अप्रचलित सिक्का र भुक्तानी रूपमा विभिन्न चाँदी वस्तुहरू। कथा पछि, त्यहाँ पैसा लागू भनेर ठूलो तामा प्लेट थिए।
पहिलो स्वीडिश चाँदीका सिक्काहरू प्रारम्भिक 1500s मा वर्ष 1000. वरिपरि Sigtuna मा minted थिए मुद्रा गणना गर्न थाले। मध्य-1800 मा सुरु 100 सेन्ट विभाजित भएको थियो जुन एक टाउको सिक्का (crowns र त्यसपछि crowns), प्रयोग स्वीडेन मा सुरु भयो। स्वीडेन मध्ये 1931 सुन मानक त्यागेर गर्दा सिक्का र बिल बीच वास्तविक फरक गायब। बैंकनोट्स को praktien मा चाहनुभएको सुन मानक एक सुन आरक्षित देखि सुन साटासाट गर्न सकिएन। यो र सामान्य मा बैंकनोट्स राज्य मा एक प्रतिज्ञा र भरोसा आधारित थियो। यसलाई अब रूपमा राज्य लागि भरोसा भर हुँदैन। वित्तीय incompetence अत्यन्तै व्यापक छ। तर एक unconscionable cashless समाज मा सबै कुनै पनि विश्वास प्रेरित गर्दैन एउटा दास भन्दा नगद मा बरु खराब विश्वास।
नोट इतिहास र विकास राम्ररी मुद्रण को कला जोडिएको छ। तिनीहरूले मूल तिनीहरूले वास्तविक भुक्तानी गर्नुअघि रसिद वा ऋण को फारम थिए। वास्तविक सिक्का जस्तै समय बारे मा चीन मा पहिलो बैंकनोट्स tillverkads आउँदै (600 ई.पू.) सुरु भयो। त्यसपछि बैंकनोट्स रूपमा बिस्तारै चीन देखि मध्य युग मा युरोप फैलियो को प्रयोग गर्न थाले। यो स्वीडेन मा वास्तव थियो र पहिलो पटक लागि 1600s मा एक युरोप मा उचित बैंकनोट्स दिनुभयो। पहिलो, Stockholms बैंको द्वारा, त्यसपछि प्रभुता बैंक र बल्ल Riksbank को 1800 को अन्त्यमा signboards। पहिले Riksbank आफ्नै टिप्पणीहरू भन्दा अन्य बैंकहरू थिचिएको। अर्को स्वीडेन गर्न, इङ्गल्याण्ड मा बैंकनोट्स मुद्रित छ।
Numismatics - एक आकर्षक विज्ञान र शौक
Numismatics सबै सिक्का को अध्ययन हो। यो पनि greedily fiddling र टोकन, बैंकनोट्स र पदक खोजी पनि समावेश छ। पनि एक सानो केटा रूपमा, लेखक पुस्तकालयको मा अस्तित्व कि बाक्लो सिक्का सूची द्वारा मोहित भएको थियो। सिक्का सङ्कलन र जस्तै बस कदर गर्न, मोड र बारी आफ्नो अधीनमा रहेका मजा वस्तुहरु प्राप्त र अन्तमा एउटा सिक्का फोल्डरमा सानो pockets मा रोक बारेमा छैन। यो पनि टिकट सङ्कलन अन्य देशहरूमा सिक्न एक तरिका हुन सक्छ जस्तै तरिकामा इतिहास सिक्न एक तरिका हो। कहिलेकाहीं लगभग एक ऐतिहासिक अवधि मात्र वास्तविक सम्पर्क हुन सिक्का।
सिक्का सङ्कलन त्यहाँ एक विशाल साहित्य छ ती सोख को छ। पहिलो स्वीडिश numismatikern एलियास ब्रेनर थियो। उहाँले जसको शीर्षक स्वीडिश राम्रो मा सिक्का को काम जस्तै "Svea र Göters देश को सिक्का शब्दकोश" केहि हुन हुनेछ 1600s को अन्त मा लेखे। यो खण्ड स्टकहोम मा सिक्का क्याबिनेट भ्रमण गर्न एक सिफारिस संग ठाउँमा पनि छ। अन्य स्वीडिश शहर मा रोचक सिक्का संग्रह पनि छन्। सिक्का मंत्रिमंडल आफ्नै संग्रहालय र स्वीडेन मा सबै भन्दा ठूलो न्यूमिजमाटिक संग्रह नगद छ। यो 1975 मा एक अलग संग्रहालय भए र क्यासल हिल गर्न दशकहरु को एक जोडी पछि सारियो।
यो किताबको मूल सन्देश एक दुनिया थप र थप कुल cashless तानाशाही आउँदै छ कसरी देखाउने छ। अधिक तपाईं एक चक्कु संग काटन द्वारा अद्भुत numismatics दुर्भाग्य आफ्नो आकर्षण गुमाउन गायब गर्न थप नगद
संसार-ऐतिहासिक डोरी को अन्त मा पनि यो कथा को एक ठूलो भाग मार्फत त्यसपछि बल्ल खण्डन बित्दै। अब यो दुर्भाग्य लेखक सिक्का र आफ्नो इतिहास बारे एक पुस्तक लेख्न सुरु गर्नु अघि रोक्न समय। यो पुस्तक पक्कै अधिकांश आधुनिक नगद संरक्षण बारेमा छ। तर यो एउटा गम्भीर अनुरोध छ। स्विडिश numismatists र सिक्का संग्रहकर्ता! एकजुट! पुरानो र नयाँ नगद संरक्षण गर्न लड्न मदत। इतिहासको cashless स्थापना आतंकवादियहरुको लडाइँ।
V 03, onsdag 20 januari 2021 kl 02:07